Dagaaladii sokeeye ee ka dhacay Soomaaliya waxa ay dhaliyeen in soomaali badan ay u soo qaxaan dibedaha. Waxaa jira caruur badan oo iyagoo da’yar la keenay qurbaha amaba ku dhashay, waxay intooda badan dhib ku qabaan qoritaanka afka soomaaliga qaarna kumaba hadlaan.
Cilmi baarisyo badan oo la sameeyey waxa ay cadeynayaan carruurta ku hadasha laba af (bilingual) ay aqoonta caruurta aad kor ugu qaado, caruurta soomaaliyeedna waxa ay haystaan fursad ay ku noqdaan kuwa laba af ku hadla maadaama ay asal ahaan soomaali yihiin isla markaana ay degen yihiin dal kale oo aan af soomaali looga hadlin.
Ururada jaaliyadaha soomaaliyeed intooda badan waxa ay isku hawlaan in ay caruurta soomaaliyeed gacan ku siiyaan dhinaca waxbarashada iyagoo u fura dugsiyo lagu barto quraanka iyo weliba kala shaqeynta caruurta duruusta ay ku soo qaataan dugsiyada caadiga ah ee ay wax ka bartaan. Caqabadda ugu weyn ee ururada jaaliyadaha soomaaliyeed ee ku nool qurbaha ka haysta dhanka baridda afka soomaaliga ee caruurta waa iyadoo aan la helin inta badan manhaj la raaco iyo buugaag loogu tala galay in ay wax ka bartaan caruurta oo soomaali ku qoran.
Buuggan waxaa loogu tala galay caruurta soomaaliyeed in ay ka bartaan qoraalka afka soomaaliga iyadoo la raaacay manhajkii u dhignaa wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ee soomaaliya laguna saleeyey habka waxbarashada dugsiyada hoose ee casriga ah, waxaana talo bixin ka soo jeediyey khubaro iyo macallimiin dugsiyada hoose.
Buuggan ayaa ah mid ay ka faa’iideysan doonaan ardayda soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibediisaba.
Annagoo aaminsan baahida loo qabo qalabka waxbarashada iyo kor u qaadida aqoonta jiilka soo koraya ayaa dadaal dheer ka dib waxaa suuragal noqotay inuu soo baxo buuggan, waxaana ku xigi doona qeybo kale oo dhameystiraya waxbarashada dugsiyada hoose.
Cabdiraxmaan Maxamed Abtidoon.